ISIS oo Beenisay in Hogaamiyahooda la Dhaawacay – Radio Daljir
Oktoobar 12, 2015 6:55 b 0
Isniin, Oktoobar 12, 2015 (Daljir) —Ugu yaraan siddeed ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidamada ururka IS ayaa lagu diley duqeyn dhinaca cirka ah iyagoo kulan uu ugaga socday magaalo ku taal waqoyiga Ciraq.
Hase yeeshee duqeyntan ayaa sida ay sheegayaan dadka ku nool magaalada ay ka dhacday iyo xarumaha caafimaadkaba waxaan ku jirin hogaamiyaha ururka IS Abu Bakr al-Baghdadi.
Dowlada Ciraq ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirka ay garaaceen goob uu kulan ka socday iyo weliba gaadiid kolonyo oo uu saarnaa Baghdadi oo doonayay inuu kulanka ka qeybgalo.
Xukuumadda Ciraaq ayaa sidoo kale sheegtay in Baghdadi loo qaaday meel aan la aqoon, lamana garanayo inay wax ka soo gaareen duqeyntan, Warkan ka soo baxay Milatariga Ciraaq ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ah warbixino ay suurtogal tahay in uu hogaamiyaha IS uu ku dhaawacmay ama ku dhintey, isagoo ka soo badbaaday duqeyn socotay muddo sanad ah oo ay diyaaradaha xulufada uu horkacayo Maraykanka ku qaadayeen labada dal ee Ciraq iyo Siiriya oo qeybo ka mid ah loogaga dhowaaqay dowlad Islaami ah.
Boga Twitterka ah oo ay leeyihiin IS ayaa daabacay war lagu beeninayo in duqeyntan lagu bartilmaameedsaday Baghdadi uuna yahay war been abuur ah.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Maraykanka ee ku sugan magaalada Baghdad oo aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in aysan hayn wax cadeymo ah oo tilmaamaya in Baghdadi uu ku dhaawacmay ama ku dhintey duqeyntii ugu dambeysay.
“Ciidamada cirka ee Ciraq waxa ay duqeeyeen kolonyo uu la socday AbuBakr al-Baghdadi iyagoo ku sii jeeda magaalada Karabala si ay uga qeybgalaan kulan ay madaxda Daacish yeelanayeen,”ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidamada Milatariga dalka Ciraq.
Ururka Daacish oo beeniyay in hogaamiyahoodii la diley ayaa sheegay in haddii ay xitaa dhacdo in la dilo ay joogaan hogaamiyaal kale oo sii wadi doono hogaaminta Dowlada Islaamiga ah.
Magaalada duqeyntan ay ka dhacday ayaa lagu magacaabaa Karabla waxana ay ka tirsan tahay gobolka Anbar ee dalka Ciraq waxayna ku taal meel ku dhow xadka dalka Siiriya.